मन्त्रिपरिषद हेरफेरले पनि तानेन सेयर बजार – Clickmandu
क्लिकमान्डु २०७६ मंसिर ४ गते १५:३१ मा प्रकाशित
काठमाडौं । वर्तमान सरकारबाट अर्थमन्त्रीबाट डा. युवराज खतिवडा हट्ने चर्चासँगै सुरु भएको सेयर कारोबारमा अन्तिम समयमा सामान्य गिरावट आएको छ ।
बुधबार सरकारका मन्त्रीहरुको हेरफेर हुँदैछ । यहिबेला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा पनि हट्छन र नयाँ मन्त्री आउने चर्चा भएको थियो । कारोबारको सुरु देखि नै बढेको बजार सवा घन्टासम्म पनि टिक्न सकेन । सवा १२ हुन्दै लाग्दा देखि घटेको बजार अन्तिम समयमा ०.५७ अंकले घटेर ११२९.४१ बिन्दुमा रोकिएको छ ।
१६५ कम्पनीको १० लाख ५७ हजार ९१२ कित्ता सेयर २८ करोड १४ लाख ३० हजार ४६९ रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । १२ वटा समूहको कारोबारमा बैंंकिङ् ०.३८, टे«डिङ ३२.९९, माइक्रोफाइनान्स समूहको उपसूचकमा सुधार आएको छ । बाँकीको गिरावट आएको छ ।
कारोबार रकमका आधारमा एनएबमी बैंक अग्रस्थानमा रहेको छ । बैंकको ३ करोड ५४ लाख ९९ हजार ९५७ रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । दोस्रो र तेस्रोमा नेपाल बैंक, प्राइम कमर्शिल बैंक रहेको छ ।
कारोबारमा साल्ट टे«डिङ कर्पोरेशन, जनउत्थान सामुदायिक लघुुवित्त विकास बैंक, घोडाघोडी लघुवित्त वित्तीय संस्था, माउन्टेन हाईड्रोका लगानीकर्ताले कमाएका छन भने रिढी हाईड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी, तारागाँउ रिजेन्सी होटल, नबिल सम्बृद्धि फण्ड, खानीखोला हाईड्रोपावर कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन् ।
अहिलेसम्म नाफा नगरेको ८ हजार ७० जनाले पाउने आइपीओ भदौ ४ देखि खुल्ने